Wararkii ugu dambeeyey ee rabshadaha Baydhabo iyo dad kale oo ku dhintay - Caasimada Online
Home Warar Wararkii ugu dambeeyey ee rabshadaha Baydhabo iyo dad kale oo ku dhintay
Wararkii ugu dambeeyey ee rabshadaha Baydhabo iyo dad kale oo ku dhintay
Baydhabo (Caasimada Online) – Ugu yaraan hal qof ayaa ku geeriyooday halka tiro kale ay ku dhaawacmeen kaddib markii maanta ay isku dhaceen Dibaxayaal ku sugan Baydhaba ay isku Ciidamada ku sugan gudaha Magaalada.
Dibadbaxayaasha ayaa isku dayay in ay Dhagxaan ku tuuraan Kolonyo ka mid ah ciidamada la wareegay maaanka magaalada,waxaana ay ku jawaabeen Rasaas nool taas oo dhalisay dhimashada iyo dhaawac qaar ka mid ah banaanbaxayaasha.
Goobjoogayaal ayaa u xaqiijiyay Caasimada Online in rabashadaasi ay ka dhaceen agagaarka Guri uu Sheekh Mukhtaar Roobow ka degganaa Baydhaba iyo inta u dhaxeysa Hotel uu isna degganyahay Musharrax Maxamed Adan Ibraahim Farkeeti.
Dhinaca kale Isgaarsinta iyo Internetka ayaa dib ugu soo laabta Magaalada Baydhaba,kuwaas oo maalmihii la soo dhaafay hakad ku jiray.
Rabashadii ka dhacay Baydhaba waxaa ku dhintay dad ku dhow 15 Qof,waxaana sidoo kale ku dhaawacmay tiro kale.
Guddoomiyaha Golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa ku baaqay in la sii daayo musharrax Mukhtaar Roobow Cali islamarkaana doorashada Koofur Galbeed dib loo dhigo.